မိ​ထွေးဖြစ်​သူက သံတုတ် ​နဲ့ လူမဆန် ​စွာ ရိုက်​နှက်​လို့ (၇) နှစ်​သမီး​လေး ​သေဆုံးခဲ့ – Na Pann San
မိ​ထွေးဖြစ်​သူက သံတုတ် ​နဲ့ လူမဆန် ​စွာ ရိုက်​နှက်​လို့ (၇) နှစ်​သမီး​လေး ​သေဆုံးခဲ့
Na Pann San W | March 5, 2020 | International News | No Comments
တရုတ် ​နုိင်​ငံ ၊ Shandong စီရင်​စုက အသက်​ ၇ နှစ်​ အရွယ်​ သမီး ငယ်​​လေး ဟာ အစားစားတာ အရမ်း​နှေး​ကွေးလွန်း လို့ ဆိုတဲ့ အ​ကြောင်းပြချက် ​နဲ့ မိ​ထွေးဖြစ်​သူ က သံတုတ်​နဲ့ တစ်​နာရီကြာ ရိုက်​နှက် ​နှိပ်​စက်​ ညှင်းပန်းခြင်းခံ ခဲ့ ရ ပါ တယ်​။
သမီး ငယ်​​လေးဟာ အလွန်​ပြင်းထန်​ ဆိုးရွား တဲ့ မချိမဆံ့ ဒဏ်​ရာ ဒဏ်​ချက်​ ​တွေ ကို ခံစားခဲ့ရပြီး ဖခင်​ဖြစ်​သူက က​လေးကို ​ဆေးရုံသို့​ခေါ်​ဆောင်​သွား ခဲ့ရပါတယ်​။
သတင်း​တွေ ရဲ့​ဖော်​ပြချက်​အရ ဖြစ်​စဉ်​မှာ သမီးငယ်​​လေးဟာ မိသားစု နဲ့ အတူ ​နေ့လည်​စာစား​နေစဉ်​ မိ​ထွေးဖြစ်​သူက ” နင်​စားတာအရမ်း​နှေး​နေတယ်​။ ငါရိုက်​မိ​တော့မယ်​​နော်​ ” လို့ ​ဆူပူကြိမ်း​မောင်းခဲ့တယ်​လို့ သိရပါတယ် ​။ အတန်​ငယ်​အကြာမှာ မိ​ထွေးဖြစ်​သူ က က​လေးကို အိပ်​ခန်းထဲ​ခေါ်သွားခဲ့တယ်​လို့ သိရပါတယ်။
သူက တံခါးကို​သော့ပိတ်​လိုက်​ပြီး က​လေးကို အရွယ်​နဲ့မမျှ​အောင်​ သံတုတ်​နဲ့ လူမဆန်​စွာ အပြင်းအထန်​ရိုက်​နှက်​ပါ​တော့တယ်​။ က​လေးရဲ့ဖခင်​အရင်းဖြစ်​သူကလဲ သူ့ရဲ့ဇနီးရဲ့အရိုက်​အနှက်​ကို ခံစား​နေကျသူမို့ က​လေးကို အဆင်​ခြင်​မဲ့စွာနဲ့ ရက်​ရက်​စက်​စက်​ရိုက်​​နှက်​​နေတဲ့အဖြစ်​ကို ဝင်​မဆွဲရဲခဲ့ဘဲ အိပ်​ခန်းရဲ့အပြင်​ဘက်​မှာ ​ကြောက်​ရွံ့စွာနဲ့​ ရှိ​နေခဲ့တယ်​လို့ သိရပါတယ်​။သူ တံခါးကိုဖွင့်​လိုက်​တဲ့အချိန်​မှာ​တော့ က​လေးမှာဒဏ်​ရာအပြင်းအထန်​ရရှိ​နေပြီး က​လေးကို​ဆေးရုံပို့မယ့်​ က​လေးဖခင်​ကို မိ​ထွေးဖြစ်​သူဟာ ငြင်းဆန်​​တားဆီး​နေခဲ့တာပါယ ​နောက်​ဆုံးမှာ​တော့ ဖခင်​ဟာ ​သေလု​မြောပါးခံစား​နေရတဲ့ က​လေးကို​ ​ဆေးရုံကို​ခေါ်​ဆောင်​သွားခဲ့​ပေမဲ့ အချိန်​​နောက်​ကျသွားခဲ့ပြီဖြစ်​ပြိး က​လေးအသက်​ကိုမမီ​နိုင်​ခဲ့ပါဘူး။ ​ဆေးရုံ​ရောက်​ပြီး ၁၀ မိနစ်​အတွင်းမှာပဲ က​လေး​လေးဟာ ​​သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်​။
က​လေး​လေး ရဲ့​သေဆုံးမှုအတွက်​ ​ဒေသမှာ ​အကြီးအကျယ်​တုန်​လှုပ်​ဖွယ်​ရာ ဖြစ်​ခဲ့ကြရပြီး ဒီဖြစ်​ရပ်​ဆိုးဟာ မ​မေ့​ဖျောက်​နိုင်​စရာ အရိပ်​မည်းကြီးဖြစ်​ခဲ့တာပါ။ မ်ိ​​ထွေးဖြစ်​သူကို​တော့ လက်​ရှိမှာ ရဲကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပြီး စွဲချက်​တင်​ စုံစမ်းစစ်​​ဆေး​နေပြီလို့ သိရပါတယ်​။
တရုတ်ကြီးထက် အမေရိကန် သာနေသေးတာလား…” သွေးထွက်သံယိုမဖြစ် ဗုံးတစ်လုံးမှမကျဲရဘဲ တရုတ်ကို ကမ္ဘာ့မြေပုံပေါ်ကနေ ဖျောက်ပစ်နိုင် တဲ့ အမေရိကန် ရဲ့ လက်နက်ဆန်း “
နောက်ဆုံး ရင်ခွဲစစ်ဆေးချက် ရလဒ်အရ အမေရိကန် လူမည်း အမျိုးသား ဂျော့ဖလွိုက် မှာ ကိုဗစ် ကူးစက်ခံထားရ ဟုဆို
လက်ကို နမ်းပြီး ကိုဗစ် ပျောက်အောင် မန်းပေး တဲ့ ဘာသာရေးဆရာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြင့် သေဆုံး
ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး အမေရိကန်ကို သမိုင်းကအဆုံးအဖြတ်ပေးသွားလိမ့်မည်ဟု တရုတ်ပြော
ကိုယ်ဘာကောင် လည်း ကိုယ့်ဖာသာ သေချာသိရင် ထိုင်သာနေ လိုက်ပါ
မျိုးဆက် ( ၄ ) ဆက် တိုင်တိုင် မြန်မာတပြည်လုံး ၁၀ တန်း အမှတ် ပထမနေရာ ကို သိမ်းပိုက် ခဲ့ကြ သူ များ
အမေရိကန် အရေးယူ ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့မှုကြောင့် စမတ်ဖုန်း Chip ပြား မလုံလောက်တော့ဘူး လို့ Huawei ပြော
တပ်မတော် မရှိလျှင် ဘာဖြစ်သွားမလဲ…? ( သို့ ) တပ်မတော် ရှိလျှက်နှင့် ဘာများဖြစ်ခဲ့ သနည်း..?
မန္တလေးတိုင်းတွင် ကိုဗစ် ကာလ အတွင်း ခိုးဝင် တရုတ်နိုင်ငံသား (၅၀)ဦး ခန့် ဖမ်းမိ
ကိုဗစ် ကြောင့် သန်းနဲ့ချီ တဲ့ အလုပ်လက်မဲ့ ပြည်သူတွေကို သီတင်းတပတ် ဒေါ်လာ ၄၀၀ ပေးဖို့ ထရန့် ညွှန်ကြားလိုက်